काठमाडौँको कोलाहलबाट एकैछिन् ब्रेक लिनुछ ? – देशसञ्चार
‘छोटो र आनन्ददायी यात्रा’
काठमाडौँको कोलाहलबाट एकैछिन् ब्रेक लिनुछ ?
प्रभात खनाल जेठ २५, २०७६
जुत्ताको तुना कस्‍नुस्, पाइन्ट माथि तान्‍नुस् ।
र उकालो लाग्‍नुस् ।
छि ! हिलो, छि ! धुलो भन्‍नु पर्दैन । र कँही भए पनि भन्‍न मन लाग्दैन ।
हिड्दा हिड्दै थकाइ लाग्यो भने थुचुक्क जहाँ बसे पनि हुन्छ । सल्लाको पातमा बसेर सल्लाकै रुखमा अडेस लागेर यता–उता हेर्नुस्, शान्त छ। यदाकदा चराको आवाज कानमा ठोकिन्छ, हृदय नै आनन्द बनाउने गरी । आफूले जाने त्यस्तै आवाज निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईका आवाज डाडा ठोक्किएर पर-पर पुग्छ।
मन लागे हिड्नुस् नलागे थुचुक्क बस्‍नुस् । कँही पुग्‍ने हतारो हुन्‍न । कहीँ छुट्ने डर हुन्न।
हिड्दा जमिनमा खसेका सुकेका रुखका पातसँग गोडा ठोक्किएर सर्‍याक-सर्‍याक हुने आवाज, टक्क अडिदा जंगलले भर्खरै फ्याकेको श्‍वासको स्यास्या आवाज र जंगललै गुञ्जाउने चराको चिरबिर ।
काठमाडौँको कोलाहलभन्दा केही माथि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज एकदमै शान्त छ। र त्यहाँ जाने जो कोही काठमाडौँको कोलाहल भुसुक्कै बिर्सछन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रका डाडा पाखामा पैदल यात्रा गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। जसका लागि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैको रोजाइमा पर्छ। दुई पाइला हिड्दा धुलाम्मे हुने र गाडीले फालेका धुँलाले वाक्क भएका काठमाडौँबासी शान्त ठाउँ खोज्दै उपत्यका वरपरका पाखा चढ्न जान्छन् । ककर्श आवाज र अशान्त वातावरणबाट आजित उनीहरु एक दिन भए पनि शान्ति र आनन्दको श्‍वास फेरेर फर्कनछन्।
नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका ट्रेकिङ रुट मध्यको एक हो नुवाकोटको पाँचमाने देखि तारकेश्‍वर मन्दिरसम्मको रुट । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ट्रेकिङ गर्नको लागि धेरै प्रयोग हुन्छ।
नुवाकोटको पाँचमानेबाट उकालो लाग्दा पुगिन्छ तारकेश्वर महादेवको मन्दिर। कँही सिढी, कही गोरेटोबाटो। क्षणमै पानी पर्ने, क्षणमै घाम लाग्ने र एकै क्षणअघि खुल्ला देखिएको जंगल हेर्दा हेर्दै कुइरोले ढपक्कै ढाक्ने ।
विस्तारै हिड्दा झण्डै ४५ मिनेटमा पुगिन्छ पहाडको टुप्पोमा रहेको तारकेश्वर महादेवको मन्दिर । मन्दिर नपुग्दै आधाबाटोबाट बाँया लाग्यो भने झरना पुगिन्छ । मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ भने झरना नुवाकोटमा ।
सुकेका पतकरले बाटै नदेखिने गरी ढाकेको गोरेटोबाटोबाट बाँया उकालोमा मन्दिर छ। उकालो लाग्दा सुरुमा बायाँ तर्फ सानो गुफा छ भने दाँया तर्फ बनाइएको पोखरी छ । पहाडको टुप्पोमा ढुङगाको खोचमा छ मन्दिर ।
मन्दिर पुग्न लेउ र पानिले चिसो बनाएको सिमेन्टका भर्‍याङ उक्लिनु पर्छ । छेउ छाउमा साना साना बाँसका घारी छन् भने कतै काफलका रुख ।
मन्दिर नपुग्दै बायाँतिर कुटी छ। बझाङका श्री नाथ बाबा यहाँ बस्न थालेको २५ बर्ष भयो । उनको साथमा अर्का एक बाबा पनि छन् । कुटीको उत्तरपट्टी चट्टानको कोचमा मन्दिर छ । मन्दिरमा पुजा गर्न र टिका लगाउन सानो पहेलो फलामको सिढी चढ्नुपर्छ । टिका लगाएर पछाडि फर्केर हेर्नुस्, खचाखच भरिएको काठामाडौँ उपत्यका देखिन्छ ।
मन्दिरको धार्मिक आस्था श्री स्वस्थानी ब्रत कथासँग जोडिएको छ। सत्ययुगमा महादेवकी श्रीमती सत्यदेवीले अग्नीमा हामफालेर देह त्याग गरेकी थिइन्। शिवजी बौलाएर मरेकी सत्यदेवीलाई बोकेर हिड्दा दाया तिघ्रा यहाँ खसेको भन्‍ने मान्यता रहेको मन्दिरका श्री नाथ बाबाले बताए ।
काठमाडौँ माछापोखरीबाट नुवाकोट जाने त्रिशुली हाइवेमा पाँचमाने पर्छ । यो माछापोखरीबाट करिव ११.६ किमी टाढा छ । हाइवेको पाँचमानेबाट दाँया करीब २.५ किमी उकालो लाग्नुपर्छ । त्यहाँसम्म सवारी साधनमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।
त्यहाँ पार्किङ गरेर करिव ४५ मिनेट उकालो लाग्यो भने पुग्न सकिन्छ तारकेश्वर मन्दिर र झरना । मन्दिरका लागि मात्र नभई साथीभाई तथा परिवारसँग रमाइलो गर्न यो एक राम्रो ठाउँ बन्‍न सक्छ । तर राष्ट्रिय निकुञ्जले तोकेको नियम भने मान्‍नु पर्ने हुन्छ ।